Kutheni uRoger Ailes Myeke uGlenn Beck Ahambe - Isiqingatha
Eyona Isiqingatha Kutheni uRoger Ailes Myeke uGlenn Beck Ahambe
Kutheni uRoger Ailes Myeke uGlenn Beck Ahambe
Cofa apha ngenxa yezizathu ezine sisebenzisa isicatshulwa Iindlela zikaRoger: Cima ikhamera [Penguin / Sentinel, $ 26.95].
Ekwindla ka-2011, uRoger Ailes uxelele intatheli u-Howard Kurtz ukuba uyala ubushushu bomnatha kwinethiwekhi. I-Ailes ayitshongo njalo, kodwa yayisele igqibe ekubeni, ngomdla weetoni eziphakathi, kuya kufuneka isuse uGlenn Beck.
U-Beck weza eFox esuka kwi-CNN ngo-2009, wajika intsimbi yesihlanu-iyure engapheliyo ebuthathaka kwishedyuli yeFox- waba yibhonanza. U-Beck wayequlethe izihlwele — u-nerdy profesa, i-slap-stick comic, umshumayeli ozelwe ngokutsha, u-jock otyhafisayo, ukulila okubuyela umva, umntu we-destiny-kwaye bonke balwela ixesha lomoya kunye neziphumo ezibi. Abanye oogxa bakhe eFox babemthatha njengempambano. Kodwa kwakunzima ukuphikisana ngempumelelo. U-Beck wayeyeyona nto inkulu emoyeni ngentsimbi yesihlanu, kwaye ezintlanu zikhokelela kwiindaba zentsimbi yesithandathu emva koko zibe lixesha lokuqala. Okwexeshana, wayefanelekile ukuba anyuswe.
U-Beck wayenendlela yokuzinza kwizifundo ezingaqhelekanga, ezinje ngo-Woodrow Wilson, kunye nokuzikhwela iintsuku. Uthelekise amaxhoba okubulawa kwabantu abaninzi kwinkampu ekufutshane ne-Oslo, eqhutywa liLungu loLutsha lwaBasebenzi, noLutsha lukaHitler. Wenza uthotho oluneenxalenye ezintathu ngoGeorge Soros, owathi, njengenkwenkwana eneminyaka elishumi elinesine ubudala eyayihlala eHungary, wanceda amaNazi ukuba athabathe ipropathi yamaJuda ukukhusela ubomi bakhe. Umthombo ka-Beck yayingu Mnu Soros ngokwakhe, owabalisa eli bali kudliwanondlebe lwemizuzu engama-60 noSteve Kroft, ongeze ngelithi akaziva enetyala ngalo kwaye ukuba akenzanga njalo, ngomnye umntu onokwenza njalo. U-Abe Foxman we-ADL ukhuphe ingxelo egxeka inkcazo ka-Beck njengengalunganga nehlaselayo. Ukuze umhlaziyi wezopolitiko okanye umonwabisi abe nesibindi sokuthetha-ngokungachanekanga-ukuba kukho inkwenkwe yamaJuda ethumela amaJuda kwiinkampu zokufa, njengenxalenye yokuhlaselwa ngokubanzi kukaMnu Soros, kuyothusa. Kwakukho uchulumanco ngasekhohlo- hayi ngokufuthi iklabhu yabalandeli bakaFoxman- ngenxa yesi sigwebo, kodwa u-Beck waphendula ngokubonisa ileta awayesandula ukuyifumana evela kuFoxman embulela ngokuba ngumhlobo wabantu abangamaJuda kunye nomhlobo wakwa-Israyeli. UFoxman emva koko wachaza ukuba u-Beck wayengenguye u-anti-Semite, wayengazi nje nge-nuances kunye neemvakalelo zomdlalo.
Olu suku lokuKhumbula ngokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo, iqela lama-rabbi angamakhulu amane lapapasha ileta evulekileyo kwiWall Street Journal icela umnini wayo, uRupert Murdoch, ukuba avume iAiles kunye ne-Beck ngokusetyenziswa kwegama elithi Nazi kunye neminye imifanekiso yoKhukula. I-Ailes yawagxotha njengeqela loorabhi bezopolitiko-uphawu olungekho ngqiqweni lwabaququzeleli bale leta, i-wing-left Jewish Funds for Justice.
Iipolitiki zikaRoger ziphambene kunokuba wonke umntu ecinga, utsho uRick Kaplan. Xa into ihamba, ujongana nayo. Yiyo loo nto ethathe indawo yentsimbi yesihlanu.
Umququ wokugqibela yayiyindibano enkulu u-Beck obekwe kwisikhumbuzo seLincoln eWashington. U-Beck wayesele ecekisiwe ngabantu abantsundu ngenxa yokucinga ukuba u-Obama wayezonda abantu abamhlophe. Ukubiza indibano enkulu kwisiza sikaMartin Luther King's NdinePhupha lokuthetha -kwaye kubonisa umtshana kaKing, uMfu Alveda King, ehambisa umntu olondolozayo ndinomyalezo wephupha lakhe-kwakucaphukisa ababukeli abaninzi. Ii-Ailes zazingayithandi kakhulu, nayo. Xa u-Al Sharpton wambiza ukuba akhalaze, u-Sharpton wamangaliswa kukuva ii-Ailes zisithi uza kuyikhathalela.
Indlela yeAiles yayikukunyamezela kunye nokudibanisa. Ukunyaniseka, uGlenn ubonakalise iimpawu zokufuna ukuhamba, utshilo. Waziva ethintelwe apha. Ngamanye amaxesha wayebonakala exakeke kakhulu ukuba angagxila kumdlalo. Kwaye ukukhupha kwakhe uMartin Luther King wayengaphezulu.
Ayisiyiyo loo nto kuphela: Uxhaso lwentengiso oluququzelelwe yiColourOfChange.org lwenzakalisa imali engenayo, kunye nokulinganiswa kukaBekk kuyekwe emva kokuhamba kwakhe eWashington. UAiles uchithe iinyanga esenza ukuba abone ukuba kuya kuba ngumdla kuye ukuba ashiye iFox. Ndingayenza ngendlela enzima, kodwa andifuni ukunika iMoveOn neMedia Matters ukoneliseka, wandixelela.
Ngo-Epreli 2011, u-Beck wabhengeza ukuba uzakushiya iFox ayokuqalisa ijelo le-Intanethi, uGlenn Beck TV. Njengentshukumo yokusindisa ubuso, kwabhengezwa ukuba uzakusebenzisana noFox ukuvelisa iipropathi zikamabonwakude nezedijithali, nangona ingekenzeki. Ii-Ailes zithathe indawo yomboniso kaGlenn Beck kunye naBahlanu, amanqaku abo abothusa wonke umntu ngokuqikelela u-Beck, kwaye washiya iyure yesihlanu ngokuqinileyo ezandleni zeFox News. Kwangelo xesha, u-Ailes wayenokuthi ngokunyanisekileyo wayefudusele uFox ngokukhuselekileyo kude nomda. Ngokubhekisele ku-Beck, iphephancwadi iForbes lanikela ingxelo yokuba ngo-2011, wazuza i-80 yezigidi zeerandi — ngaphezulu kwayo nayiphi na indumasi kwezopolitiko nangaphezulu kunoko wayekufumene eFox. I-Ailes yayichanekile kwakhona: Wonke umntu waphuma ngaphambili.
Icatshulwe kwi Iindlela zikaRoger: Cima ikhamera , epapashwe nguSentinel, ushicilelo lwePenguin Group (eUSA). Ilungelo lokushicilela (c) Zev Chafets, 2013.
Ulahlekile kwivenkile enkulu: Abaphuli-mthetho baphanga i-60,000 yeedola kwi-Bowery Whole Foods
I-Bombastic kunye ne-Absurd, 'Abafana abangalunganga ngobomi bobomi' ikwalulonwabo olukhulu
UChristie ukuba anike iNtetho ngexesha leNkqubo ye-RNC 'Yenza iMelika isebenze kwakhona' kwiNkqubo
ndijonga njani irekhodi lam lolwaphulo-mthetho simahla
Iglobhu yegolide vs ibhaso lemfundo
Ukumangalisa indalo yendalo yesigcawu
ibernie sanders simon kunye negarfunkel
ezomileyo ezomileyo zevorizers 2019
Ngaba uGary Johnson angaphumelela ngo-2016
I-nottingham cottage kwibhotwe lase kensington